မိဘနှင့်သားသမီး | ကျွန်မ၏ခံစားမှုများ သီကုံးရာ လွတ်လပ်ခြင်းအနုပညာ
December 3, 2007, 3:15 pm
Filed under: Articles, My Opinion, True Feelings
`လူငယ်´ဆိုသည်မှာ အမြဲတက်ကြွသည် .. ။ မိမိယုံကြည်ရာ ၊ လုပ်ချင်ရာအတွက် စိတ်အားထက်သန်သည် ။ ဆူးတွေပြည့်နှက်နေပါစေ .. ထိုဆူးများကိုကျော်လွှားပြီး ပန်းတိုင်ကို ရောက်အောင်သွားချင်သည် .. ။ စိတ်ပူတားဆီးခြင်းထက် လိုအပ်သည်များ ၊ ဖြစ်သင့်သည်များကို ပိုမိုအတွေ့အကြုံများသော လူကြီးမိဘများက အကြံသာပြုသင့်သည်ဟု ကျွန်မ မြင်မိသည် … ။
Comment by Tina December 4, 2007 @ 12:24 am
Comment by ကလိုစေးထူး December 4, 2007 @ 2:19 am
Comment by Anonymous December 4, 2007 @ 5:04 am
Comment by Ko Paw December 5, 2007 @ 3:33 am
Comment by Anonymous December 5, 2007 @ 8:44 am
also, i request to copy your post and want to send with mail to my friends and my parents since some in Myanmar can’t access blogger.com.
Comment by သော ကြာ သူ ရ December 7, 2007 @ 5:41 pm
Thanks, everyone. Dear Thaut Kyar Thu Ya, you can send it to your friends or parents. Just write down only my name at the end of article. Thank You 🙂
Comment by LIN LET KYAL SIN December 8, 2007 @ 3:18 am
Comment by ဂျစ်တူး - gyit_tu December 8, 2007 @ 6:19 pm
Comment by နှင်းဆီနီနီ December 24, 2007 @ 12:56 am
Comment by pee January 26, 2008 @ 12:07 am